Tsumo nengano namukanya | Kwayedza
11 May, 2018 - 15:05	 2018-05-10T15:47:14+00:00 2018-05-11T15:00:04+00:00 0 Views
Tipe tsumo inoenderana nekarungano aka:
PANGUVA yesarudzo, Tsuro akaudza vanhu kuti, “Ndiri mwana wenyu. Ndiri kukumbirawo mavhoti enyu. Kana mukandivhotera, ndichakuitirai zvinhu zvizhinji kwazvo. Ndichapedza hurombo, ndichakuvakirai zvitoro zvine mabhawa nekukuisirai makombi mumigwagwa yenyu. Ndichakuisirai WhatsApp nekupa madzimai ese wivhi.” Vamwe vakafara, asi vamwe vakati “Mufarirei zvenyu Tsuro uyu, asi isu tinomuziva, tinotenda azviita.”
. Tsumo yacho: Totenda maruva tadya chakata.
PAAKAPEDZA chikoro, Chipembere akaenda kunotsvaga basa kuHarare. Basa rakanetsa kuwana, akatanga kugara neshamwari.
Shamwari dzake dzakazomudzinga nekuti akanga asingatenge kana chingwa zvacho. Chipembere akanogara kwasekuru vake kuChitungwiza. Ikoko aiswera akagara zvake. Mushure memwedzi mitatu, akabva atizirwa nemusikana wake.
Sekuru vake vakamuti, “Chipembere, handingarambe ndichikuchengeta iwe wakura kudai. Wava kufanirwa kuzvionera nekuti watokura. Chibva pano nemukadzi wako munozvionerawo mega.”